ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: ဖြေဆိုထားမူများကို သဘောမကျဘူး...
ဒီနေ့ ဟာဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဖြေများကို တင်ပေးရမယ်နေ့ပဲ ….. ဒါပေမဲ့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဖြေဆိုထားတဲ့သူတွေများနေတယ်….. အထူးသဖြင့်ဖြေဆိုထားတဲ့သူမှာ နည်းနည်းနာမည်ကြီးသွားတာကတော့ ကို ညွှန်ရွှေဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ.. မဆိုးပါဘူး နာမည်ကလည်း သူ့အဖေနာမည်တွေတော့ ပါသား….
ဦးခင်ညွှန်တို့ ဦးသန်းရွှေတို့ ဒီလူတွေကလည်း တိုင်းပြည်ကို ဘုရားတရားဆိုပြီး စေတီတွေ ဆောက် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍကို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် မိမိ့ယုံကြည်မူတခုကို အများဆန္ဒပါမပါ ဆောက် တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ငတ်မွတ်ပြီး သေသေ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်ထားတာကြတယ်… အခု ကိုညွှန်ရွှေဆိုတာကတော့ ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာ ..ဘာမှမထူးဘူး ဒီလူတွေလည်း ဒီမိုကရေစီလို့ပြောနေတာ … သူလည်း ဦးခင်ညွှန်တို့ ဦးသန်းရွှေတို့ နေရာများရကြည်စမ်းပါ …. ဒီပုံစံပဲ လာမါ…
ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓ(ဂေါတာမကုလား)ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေသ၍ ခင်ဗျားတို့အားလုံး လိုချင်တဲ့ ပြည်ဝသော ဒီမိုကရေစီ အဆင့်အတန်းရှိသော ဒီမိုကရေစီ လုံးဝမရစေရဘူး….. ကျွန်တော်ပြောပြီးပါရောလား ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံဖြစ်လို့ အတိုးတက်ဆုံး နိူင်ငံ ထိုင်းနိူင်ငံတစ်ခုပဲ ရှိတယ်.. ဒါတောင် တချက်တချက် စစ်အစိုးရက အာဏာဝင်ဝင်ထိန်းနေရတယ်.. ထိုင်းအစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိူင်ငံအတိုးတက်ဆုံးဆိုလို့ ကိုယ်ရပ်တည်ချက် ကိုယ်တိုးတက်နေတယ်များ ထင်သလား.. မထင်ပါနဲ့ဗျာ… အနောက်က ပါးပါးကြီးအမေရိကန်က ကူညီပေးနေလို့ ….အခု ဒီလို အခြေနေမျိုးဖြစ်နေတာ…
ယနေ့တရုတ်နိူင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့တဲ့ နိူင်ငံကနေ ကွန်ဖြူနစ်နိူင်ငံဖြစ်တာ နှစ်(၆၀)ပြည်ပြီ….ကမ္ဘာမှာ လက်မထောင်နိူင်တယ်.. ရင်ဘောင်တန်းလာနိူင်တယ်…. ဒါတွေက သက်သေတွေပဲ… ဒါတွေအားလုံး မော်စီတုန်းရဲ့ ကောင်းမူတွေပါပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းတလျှောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်သော (သိုင်း)ကျမ်းများကို အဖျက်ဆီးခဲ့ဆုံးက မော်စီတုန်းပဲ…ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တရုတ်ကိုတော့ မနာဘူးဗျာ… ကုလားကို မုန်းတယ်…. ကိုးကွယ်တာက ကုလား….ထားပါတော့လေ ဒါက စကားစပ်မိလို့ ပြောပြလိုက်တာပါ......
ကဲ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောကြလိုက်ရအောင်… ဒီနေရာ အဖနာမည်ဦးခင်ညွှန် ၊ ဒုအဖနာမည် ဦးသန်းရွှေတို့ ၏ သား ကိုညွှန်ရွှေ (ဒါလေးကတော့ ဟာသပေါ့ = အမေမရှိပဲ အဖေနှစ်ယောက်တဲ့မွေးတဲ့သားပေါ့ဗျာ) သူရေးထားတဲ့စာကို သွားကြည့်လို့ရတယ်…
သူတို့ဖြေသမျှအားလုံးကို လိုက်နှိပ်ကွပ်ရရင် စာရေးသူ သူတို့၏ ပိဋကတ်ထဲက အမှားအယွင်းများကို ဖော်ထုတ်ပြနိူင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ စာရေးသူ မေးတာများကို စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပဲ သူတို့ကျမ်းအတိုင်းပဲ ဖြေပေးတော့မယ်..
(၁)အဘယ်ကဲ့သို့ ကုသိုလ်ကောင်းမူကို ပြုပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလဲ?????
အဘယ်ကဲ့သို့ ကုသိုလ်ကောင်းမူနဲ့မှ နိဗ္ဗာန်မေ၇ာက်နိူင်ပါ.. စေတီဆောက်လုပ်၍ နိဗ္ဗာန်မရောက်နိူင်ပါ... ဂေါတာမရုပ်တုဆောက်လုပ်၍ နိဗ္ဗာန်မရောက်နိူင်ပါ. (ဂေါတာမလက်ထက် ဂေါတမ ကိုယ်တိုင် ဘာစေတီ၊ ပုထိုးကိုမှ တခုမှ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ.. သူ့ရုပ်ထုကို ထုလုပ်ကိုးကွယ်ကြပါလို့ တခွန်းတလေမှ မမှာခဲ့ပါဘူး… ယနေ့ ပြုလုပ်ကိုးကွယ်နေကြဖို့ ပြောကြခြင်းတွေဟာ သီဟိုဠ်မှာ ငနာဘုန်းကြီးများရဲ့ အဌာကတာလေရွှင်္ီး ပြောကြသော စကားသာ ဖြစ်ပါတယ်….. သူ့ထံမှ အကူအညီလာတောင်းတဲ့သူများအားလုံးကို ငါလည်းမတတ်နိူင်ပါ..
ငါသည်လည်း အိုရတယ် ငါသည်လည်း နာရတယ်.. ငါသည်လည်း သေရမယ်… လောကဓမ္မဓံ ကို ပြောပြပေးခဲ့တာပဲ ရှိတယ်.. စာရေးသူ ရှေ့ပိုစ်တွေ မှာ သူ့ထံအကူအညီလာတောင်းတဲ့ သူတစ်ဦးတစ်လေကိုမှ သူမကယ်နိူင်ခဲ့ဘူး… တရားပဲ ပြနိုင်ခဲ့တယ်... ရေးသားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလိုတရားပြတဲ့သူ့ကို ဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်နေကြတော့ စာရေးသူအံသြမိတယ်.. ကျွန်တော်သာ ဂေါတာမရှိစဉ်မှာ လက်ထက်မှာ မွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂေါတာမဆီ သွားပြီး "ဆရာဂေါတာမ ကျွန်တော်အနာများ ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်မလား" လို့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် … ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ဂေါတာမက “အိမ်း အသင်လူသား ငါပင်လျှင် ငါ့ယောက်ဖ ဒေ၀ဒက်ခဲနဲ့ ထုလို ခြေမ ကွဲတာတောင် ငါ့ရဲ့ ဇီဝက ဆေးဆရာနဲ့ ကုနေရတယ်.. ငါသည်လည်း မကုသနိုင်ပါကွယ်. လို့ ပြောတာနဲ့ ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောမယ်ထင်လဲ
“ဟဲ့ ဦးဂေါတာမရယ် ခင်ဗျားများ ကျွန်တော့်အနာကို ပျောက်ကင်းအောင် ကယ်နိုင်မလား အကူအညီတောင်းကြည်တာ ခင်ဗျားက အိုရမယ် နာရမယ် ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း သိတာပေါ့ ခင်ဗျားလည်း သေရင် မီးရှို့ခံရမှာ ကျွန်တော်လည်းသေရင် သင်္ချီုင်းကုန်းသွားရမါ ဘာထူးဆန်းမလဲဟ ခင်းဗျားပြောတာကို ဘာမှ မသိတဲ့ ကလေးကပဲ အထူးအဆန်းလုပ်မပေါ့…
အိုရမယ် နာရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိတဲ့ကိစ္စ ဒါကြီးကို ရှောင်လွှဲလို့မှ မရတာ အထူးအဆန်းလုပ်လို့ဗျာ.. ခင်းဗျားကို ကိုးကွယ်နေကြတဲ့သူတွေအဖို့ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်ဗျာ…တော်တော် ခင်ဗျားလိုလူမျိုးနဲ့ နောက်တခါ မဆုံပါရစေနဲ့ဗျာ”
လို့ ပြောပြီး ထွက်ခဲ့မှာ… ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘယ်လို သတ်မှတ်လဲဆို အိုရ ကောင်းမှန်းမသိ နာရကောင်းမှန်းမသိတဲ့သူတွေ ဂေါတာမ ပြောပြမှ သိနေကြတယ်သူတွေ ဒါကြောင့်မို့ ဂေါတာမကို အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်နေကြတာလို့ စာရေးသူသတ်မှတ်ပါတယ်.. ဒီ့ပြင်ဘာသာဝင် ဘာသာမဲ့များကတော့ အိုရကောင်းမှန်းလည်း သိပါတယ် နာရကောင်းမှန်းလည်း သိပါတယ်.... ဒါကြောင့် ဂေါတာမကို မကိုးကွယ်ကြဘူး )
မဂ်စိတ်ကို မွေးဖြူရမယ် မဂ်စိတ်ကို ရရှိနိူင်ဖို့ ဒါနစိတ်နဲ့ မဂ်စ်ိတ်မဖြစ်ဘူး။ သီလစိတ်နဲ့လည်း မဂ်စိတ်မဖြစ်။ သမထစိတ်နဲ့ လည်း မဂ်စိတ်မရနိူင်ဘူး။ ၀ိပဿနာစိတ်နဲ့ပဲ မဂ်စိတ်ကို ရရှိနိူင်မယ်….အဲဒီဝိပဿနာစိတ်ကို အချိန်တိုင်း စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေအောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်.. မဂ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်ပါ.. http://www.dhammaweb.net/notes/view.php?id=100
(၂) နိဗ္ဗာန်ကို ဘယ်သူဖန်တီးထားတာလဲ (သို့) ဘယ်သူဖန်ဆင်းထားတာလဲ..(ကျိန်းသေတာတော့ နိဗ္ဗာန်ကို ဂေါတာမ ကိုယ်တိုင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ် တဦးတယောက်ဆိုလျှင်လည်း သူ့၏အမည်ကို ဖော်ပြပေးပါ)
တကယ်တော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာမှမရှိဘူး။။ သံသရာဘ၀တွေကို အဆုံးသတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်.(သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မူအရ နောက့်ဘ၀မှာ ခွေးဖြစ်ရာ သူတောင်းစားဖြစ်စရာ ချီးပိုးတိုး ကောင် ဖြစ်စရာ မလိုတော့ဘူး သူ့၏၀ိဥာဉ်က ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီ ဖြစ်တယ်.) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအစွဲအလမ်းက သံသရာရှိနေသေးလို့ ဒီဘ၀မှာ လူဖြစ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ထင်မှတ်နေကြတယ်..
ဒီသံသရာကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဂေါတာမရဲ့ ကျင့်စဉ်အားဖြင့် ရောက်နိူင်မယ်လို့ ယုံကြည်စွဲမှတ်ကြတယ်… (ဒါပေမဲ့ စာရေးသူ သေချာပြောနိူင်တာ တစ်ယောက်မှ နိဗ္ဗာန်မရောက်ကြဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆို နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင် လူတွေလျော့လျော့သွားရမှာပေါ့ အခုကမ္ဘာမှာလူတွေက တနေ့တခြား ပိုပိုများလာတယ်.. ကျွန်တော်စိတ်ထင် နိဗ္ဗာန်ကကောင်တွေရော ငရဲပြည်ကကောင်တွေရော နတ်ပြည်ကကောင်တွေရော လူပြည်ကို ဆင်းလာကြလားမသိဘူးဗျာ……)
(၃) လူသတ်သမား နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား???
ချီးဗူးညွှန်ရွှေကတော့ ကျွန်တော့ေ၇းပြီးသာ ပို့စ်များကို ဖတ်ပုံမရဘူး ငနာရေ ခင်းဗျားအတွက် ရော့ ကျွန်တော်ဒီမှာေ၇းထားပြီးပြီ
အင်္ဂုလိမာလ အကြောင်း အဲ့ဒီပို့စ်မှာလည်း စာရေးသူပြောချင်တယ်ဗျာ… သူ့ဆရာက အင်္ဂုလိမာလကို ချောက်တွန်းချင်လို့ မကောင်းတဲ့ ပရိယာယ်ဆင်ပြီး ပေးတယ်လို့ ကြံကြံဖန်ဖန်ရအောင် တွေးနေကြသေးတယ်ဗျာ. (ချောက်ပဲ တွန်းတွန်း တောင်ပေါ်ပဲ တွန်းတင်ပါ) လူသတ်စရာလားဗျာ… အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လိုက်သတ်တာ.. ယုတ္တိမရှိတာကြည့် …. သူ့အမေကိုစော်ကားသွားလို့ သတ်တာလည်း မဟုတ်….သူ့နှမကို စော်ကားသွားလို့ သတ်တာလည်းမဟုတ်…..
သူ့အမျိုးတဆွေတမျိုးလုံး သတ်လိုက်လို့ ကလဲစားချေတာလဲ မဟုတ်….သူ့ဆရာက လက်ညှိးလိုချင်တာနဲ့ ဘလိုင်းကြီး လိုက်သတ်တာ… သတ်မိတဲ့ သူကလည်း နည်းနည်းပါးပါးလာလို့ အောက်မေ့ပါတယ်.. ကိုးရာ ကိုးဆယ် ကိုးယောက်ဗျာ.. အိုး နည်းတာ မဟုတ်ဘူးဗျာ …..
စာရေးသူ ယနေ့ထိ လူတစ်ယောက်တောင် မသတ်ဖူးသေးဘူး…ဒီလိုကောင်မျိုးတောင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင် ဘယ်သူမရောက်နိူင်စရာ ၇ှိတော့မလဲ ဖြေပေးကြပါ…. အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ကျမ်း … ကဲလိုက်သတ်တဲ့ကောင်ကြတော့ သူရဲ့ မကောင်းမူ ပြုတဲ့ အကုသိုလ်ကို မခံရဘူး….ဂေါတာမသြ၀ါဒခံယူလိုက်လို သူရဲ့ မကောင်းမူအကုသိုလ်မူများဟာ အချည်းနှီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် ဟောလိုက်တဲ့ ဂေါတာမကြတော့ သူရဲ့အကုသိုလ်တွေ သူဘာကြောင့်ခံနေရသေးလဲ…. ၀မ်းသွားပြီးသေတယ်..(ဒါက အတိတ်က အကုသိုလ်ကြောင့်လို့ပြောတယ်) ဂေါတာမသောက်မဲ့ရေ သူညီအာနန္ဒ က ခပ်လာတယ် သူရှေ့ရောက်တာနဲ့ ရေ က နောက်သွားတယ်…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရှေ့ဘ၀က နွားငယ်လေး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂေါတာမဟာ နွားမကြီးသွားမဲ့ရေကို ခလုတ်တိုက်မိလို့ သူ့ရှေ့ဘ၀က အကုသိုလ်ကြောင့် ဒီဘ၀မှာ သူ့ရှေ့ ရောက်လာတာနဲ့ ရေက နောက်သွားတယ်တဲ့ဗျာ..... သူ့ခါးနာတယ် ရှေ့ဘဝက လက်ဝှေ့သမားလုပ်ခဲ့လို့တဲ့ ဒါကြောင့် ဒီဘဝမှာခါးနာနေရတာတဲ့ဗျာ.....တနေ့ကုန် တနေ့ခမ်းဗျာ ဒီအတိုင်းထိုင်နေမှတော့ ခါးနာလာတာပေါ့ အသိဥာဏ်ဦးနှောက်က မ၇ှိတော့ ရှေ့ဘဝဆိုပြီး ပြောချင်တာတွေ လျှောက်ပြော (လူငယ်အဆိုတော်တွေ ပြောသလိုပြောရရင် ဦးနှောက်မှ မရှိတာကို)
ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အရာလေးတွေကို ဒီဘ၀မှာ ပြန်ခံနေရတဲ့ ဂေါတာမဟာ သူဟောတဲ့ တရားကြောင့် အင်္ဂုလိမာလဟာ သူ့ရဲ့ လူသတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေ အချည်းနှီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ ဘာသာခြားမိတ်ဆွေများ ဘာသာမဲ့ မိတ်ဆွေများ ယုံကြည်ဖွယ်ရာ ၇ှိလား(ကဲ ကြည့်ပါအုံး မညီညွှတ်တဲ့ အချက်တွေ) ကဲလူသတ်သမားရဲ့သုတ်ကိုလည်း အန္တရာယ်ကင်းအောင်တဲ့ ရွတ်ဆိုနေကြတယ်.. မှားပါတယ်ကွယ် (လူသတ်သမားသုတ်ကို မရွတ်နဲ့ သောက်ချလိုက် ကြားလား)
(၄) မိန်းမငါးယောက်ယူထားတဲ့သူ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား????(ဥပမာ ဂေါတာမ လိုလူမျိုးပေါ့)
သူတို့ ကျမ်းအရဆို နိဗ္ဗာန်ေ၇ာက်တယ်ပေါ့ဗျာ.. ဂေါတာမဟာ အသက်ဆယ်ခြောက်နှစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်. အ၇င်ဆုံး ဂေါတာမအမေ ညီမရဲ့ သမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်.(ပြောရရင် သူ့နှမ တ၀မ်းကွဲပေါ့ဗျာ) ဒါကြောင့် ဘာသာခြားများ ဘာသာမဲ့များ ဂေါတာမက သူ့ညီမကို ပြန်ယူတဲ့ အကြောင်းမပြောကြနဲ့နော်..
ဘာသာမဲ့များ၊ ခရစ်ယာန်တွေ၊ မွတ်စလင်မ်တွေ ယောင်ရမ်းပြီး ညီမတ၀မ်းကွဲတွေ မယူမိစေနဲ့ ဒီအခါကြရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မိတ်ဆွေတို့ကို ဒီလို ပြောမှာ (နှမ…..)လို့ ပြောမှာ.. မိတ်ဆွေတို့ ဂေါတာမကို အဲလို (နှမ….) သွားမပြောနဲ့နော် သူတို့ မကြိုက်ဘူး… အဲ့ဒီလိုမျိုး ခေါ်ဖို့ ဘာသာခြားများ ဘာသာမဲ့များ အတွက် ခေါ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး… အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်ဖို့က သီးသန့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲ ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်နော်(သွားမခေါ်မိကြစေနဲ့ မကြိုက်ကြဘူးနော် ဟီဟီး) …မိန်းမငါးယောက်ရှိတဲ့ ကျမ်းကို မြုပ်ထားတယ်…
ဒီပြင်ဘာသာဝင်တွေ အထင်သေးမှာစိုးလို့ … ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့ စစ်ရှုံးလို့ လိုက်သတ်တာ ထွက်ပြေးတော့ သီဟိုဠ်ထိတိုင် ပြေးခဲ့ရတယ်.. အဲ့ဒီအခါကြမှာ ဂေါတာမရဲ့ မယားတွေ သားတွေ နာမည်ပေါ်တော့တယ်… နောက်တချက်က မောင်းမမိသံ လေးထောင်ကို ယောသဓါရာက မောင်းမမိသံတထောင်ကို ဦးဆောင်ပြီး သွားတယ်.. ကျန်သုံးထောင်ကြတော့ မရေးထားဘူး....
အဲ့ ဒီအခါကြတော့ သူ့မယားရဲ့ ဇာတ်မြုပ်ကွက်တွေ ပေါ်တော့တာပေါ့ဗျာ… သူတို့ ယုံကြည်မူအရဆိုရင် ဂေါတာမ နိဗ္ဗာန်ေ၇ာက်တယ်တဲ့ ….. ၀မ်းသွားတာကြတော့ ရှေ့ဘ၀အကုသိုလ်လို့ ရေနောက်တာကို ရှေ့ဘ၀ အကုသိုလ်လို့ ပြောရင် ဂေါတာမ ဤသို့သော မိန်းမအများကြီးများကို ယူတဲ့ အကုသိုလ်ကြတော့ အဘယ်ချိန်မှာ ပေးဆပ်လိုက်ရလဲ…နောက်ဘ၀ကျမှပဲ နိဗ္ဗာန် မရောက်ပဲ ပေးဆပ်လိုက်တာလား….ယခုဘ၀တင်ပဲ တောထဲသွားပြီး တိရစ္ဆာန်နဲ့လား?????? (ဟုတ်တယ်လေ မေးတော့မယ် ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်ခံရမယ်လေ....)ဒါမှ မဟုတ် နောက်ဘ၀ကြမှ မိန်းမလျာဖြစ်သွားလား….. (မေးခွန်းတွေက အများကြီး မေးစရာ ဖြစ်လာပြီ) ကဲ စဉ်းစားပြီး ယုတ်တိရှိရှိလေး အဖြေပေးကြ.....
(၅) အရက်သမား နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား????
အရက်သမား နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း မတွေ့ပါ… ဂေါတာမအမျိုး တယောက်အရက်သမား နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းတော့ ၇ှိသည်.. ဒါကြောင့် အရက်သမားများ နတ်ပြည်တော့ေ၇ာက်နိူင်သည်… နိဗ္ဗာန်တော့ မရောက်နိူင်ပါ… ဘာကြောင့်လဲဆို အရက်သမား နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းထဲမှာ မတွေ့ပါ…
အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရင် အစွန်းအရမ်းရောက်သွားမှာစိုးလို့လေ အရက်သမား များ အရက်ဖြတ်ပြီး ၀ိပဿနာ ကိုရှုခြင်းဖြင့် ရောက်နိူင်သည်.. ဒါပေမဲ့ အရင်ဆုံး စိတ်ငြိမ်ရာမှာ တရားကျင့်(ဂေါတာမကတော့ တောထဲဝင်ပြီး ကျင့်တယ်(ကျင့်တော့ ကျင့်တယ် ဘာကျင့်တာလဲ မသိဘူး)) တယောက်တည်းနေ ၊ အများနဲ့ နေရင် တရားပျက်တယ်.. တယောက်တည်းဆိုရင် တရား၊ နှစ်ယောက်ဆိုရင် စကား၊ သုံးယောက်ဆိုလျှင် အလယ်ကားတဲ့ဗျာ.....
ဒါကြောင့် တယောက်တည်းနေ တစိတ်တည်းထား မဂ်စိတ်ကို ရရှိနိူင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်.. အိပ်ရင်လည်း တယောက်တည်း အိပ် …..ဂေါတာမကိုယ်တိုင်လည်း တယောက်တည်းအိပ်တယ်တဲ့ (တောထဲ ၀င်ပြီး တရားထိုင်တယ် တရားထိုင်တယ်နဲ့ ညဘက်ညဘက် လူလစ်တုန်း သူ့မယားတယောက်ယောက်ထံမှာ သွားအိပ်ရင် ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့)
(၆) ရောက်နိူင်မယ်ဆိုရင်လဲ လူသတ်သမား/မိန်းမအများကြီးယူသော်သူ/အရက်သမား က မည်ကဲ့သို့ ခံယူချက်ကို မွေးပြီး အကျင့်သီလကိုစောင့်ထိန်းပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလဲ????
လူသတ်သမားများ ၊ မိန်းမအများကြီး ယူသောသူများ အရက်သမားများ အရင်ဆုံး တောထွက်ရမယ်… ဂေါတာမကတော့ အရင်ဆုံး အသက်၂၉ကနှစ်မှာ တောထွက်ပြီး ဟိန္ဒူ ရသေ့ဆရာများထံ ပညာသင်ကြားပြီး အသက်သုံးဆယ်ငါးနှစ် မိမိဥာဏ်နဲ့ သင်ကြားပြီးခဲ့သော တရားနှင့် ပေါင်းစပ်၍ တရားဟောခဲ့တယ်( ညွှန်ရွှေ နင့်ဘုရား ဂေါတာမက ဆရာရသေ့နှစ်ပါးဆီမှာ ပညာသင်ခဲ့ကြောင်းကို လေ့လာဖတ်ရူပါအုံးကွယ် ဆရာ့ကို အာခံ အာဂေါင်း လှံစူးမယ်နော်..... ငနာ ညွှန်ရွှေကို ကြည့်ရတာ ကျမ်းကို သိပုံ မပေါ်ဘူး)
၀ိပဿနာစိတ်ရဲ့ အခြားမဲ့မှာပဲ မဂ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ သန္တာန်မှာ ၀ိပဿနာစိတ်ကို အချိန်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း ဖြစ်နေအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်.. စားရင် စားတယ် ဝါးရင် ဝါးတယ်(ဆော်ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်) စွန့်ရင် စွန့်တယ်..... ထိရင် ထိတယ်(တင်ပါးကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်).....
ကိုင်ရင်ကိုင်တယ်…(သူ့တပါး ထမိန်စကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်) ၀ိပဿနာစိတ် တစိတ်တည်းထားခြင်းက အဓိကကျတယ်အတွက်ကြောင့် အပေါင်းအဖော်နဲ့ နေခြင်းကြောင့် မိမိရဲ့ သန္တာန်မှာ ၀ိပဿနာစိတ် တစိတ်တည်း မထားနိူင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီဝိပဿနာစိတ် တစ်စိတ်တည်းဖြစ်ဖို့အတွက် အပေါင်းအသင်းကို စွန့်ရမယ်.. မိန်းမရှိရင် မိန်းမကိုစွန့် ….ယောင်္ကျားရှိ ရင် ယောင်္ကျားကိုစွန့် …သားမယားကို စွန့်ရမယ်…..
ဥပမာ ဂေါတာမလိုလူမျိုးပေါ မိန်းမကို စွန့်ပြီး တောထွက်သွားတယ်…(နောက်မှ ညဘက်ညဘက်ခိုးစားတာပေါ့) ဧကော စရေ ခဂ္ဂ၀ိသာဏကပ္ပေါ တဲ့ ၊
“ကြံ့ချိုလို တစ်ယောက်တည်းနေပါ၊ ကြံ့ချို လို တစ်စိတ်တည်းထားပါ.” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်…
ဒါကြောင့် ကြံ့ချို လို ကျင့် သမင်ချို လို မကျင့်နဲ့… ကြားလား…. အသဇ္ဇမာန လို ငြိတွယ်တာခြင်းမရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို ကျင့်ရမယ်.. သက်ရှိသက်မဲ့ ဘယ်အာရုံအပေါ်မှာ ငြိတွယ်ခြင်းမရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလို ကျင့်ရမယ်…. ယောင်္ကျားက မိန်းမရှိရင် သူငယ်ချင်းကို ပေးလိုက်…. မိန်းမက ယောင်္ကျား၇ှိ၇င် ယောင်္ကျားကို ဆိပ်ကမ်းမှာ ကူလီထမ်းခိုင်း၊ ပြီးမှ ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အကြွေးအမွေးပြုခိုင်းရမယ်… ကလေးတွေရှိရင် ကလေးတွေကို သူတောင်းစားလို ခွက်ဆွဲပြီး လိုက်တောင်းခိုင်း ။ရလာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ တရားဆက်ကျင့်… ဘယ်အရာကိုမှ သံယောဇဉ်မထားနဲ့
ချစ်ရတာလည်းဒုက္ခ၊ မုန်းရတာလည်း ဒုက္ခ၊
ချစ်သူ့ကို မတွေ့ရရင် စိတ်ပူလောင်ရသလို
မုန်းသူကို မြင်ရရင်လည်း စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်..
ဒါကြောင့် ချစ်သောသူကို စိတ်မစွဲ လန်းရ အောင် မုန်းသောသူကိုလည်း မမြင်ရအောင် မျက်လုံးကို အ၀တ်စည်းပြီး လမ်းလျှောက်….
ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ရင် ၀ိယေဟိ ၀ိပ္ပယောဂဒုက္ခ ( ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းသောဆင်းရဲခြင်း) ဆိုတာ လုံးဝမရှိနိူင်တော့သလို ဘယ်သူကိုမှ မမုန်းရင်တော့ အပ္ပိယေဟိ သမ္ပယောဂဒုက္ခ (မုန်းသူနဲ့ ကွေ့ တွဲရသောဆင်းရဲခြင်း) ဆိုတာလည်း လုံးဝမ ရှိတော့ဘူး..
ပိယာနံ အဒဿနံ ဒုက္ခံ၊
အဓိပ္ပါယ်က “ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မချစ်နဲ့ ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မမုန်းနဲ့”
ချစ်ရတဲ့သူ၇ှိရင် အဲဒီချစ်ရသူတွေ နဲ့ ခွဲခွာရတဲ့အခါ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်..... မုန်းရတဲ့သူရှိရင် အဲဒီမုန်းရတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတဲံအခါ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ချစ်လည်း မချစ်နဲ့ မုန်းနဲ့ မမုန်းနဲ့ (သူများကျွေးခါမှ ခန့်ခန့်ကြီး ထစားချေ အခန့်သားနဲ့ပေါ့ဗျာ)
(၇) နိဗ္ဗာန်မှာ ဘာရှိလဲ????
နိဗ္ဗာန်မှာ ဘာမှမရှိပါဘူး၊ ဘာမှ မရှိတော့..... ဘူး(ဘယ်သူ)မှာ မရှာပါနဲ့ဗျာ.... ဒါပေမဲ့ လူသတ်သမား(အင်္ဂုလိမာလ) နဲ့ မိန်းမ အများကြီး ယူတဲ့ (ဂေါတာမ)တို့ တော့ ရောက်သွားကြတယ်… ဘယ်ကျမ်းကပြောလဲ ဆိုတော့ ပိဋကတ်သိုင်းကျမ်းများက ပြောပါတယ်….
(၈) နိဗ္ဗာန်နှင့် နတ်ပြည်၏ ကွာခြားချက်ကို ဖော် ပြပေးပါ. နတ်ပြည်ကိုရောက်လျှင် နတ်သမီး ဘယ်ညာ အပါးငါးရာယောက်ဖြင့် နေရမည်ဆိုတာ တကယ်လား လေရွှီးထားတာလား????
ညွှန်ရွှေကတော့ နတ်ပြည်၇ှိလားလို့ မေးရင် သူလည်း မသိဘူးတဲ့ ပထမတော့ သိသေးတယ် နာဆာအဖွဲ့ ညံဖျင်းမူကြောင့် နတ်ပြည်လည်း ပျောက်ပြီး၊ နတ်ပြည်က နိဗ္ဗာန်ကွာခြားချက်မှာ နိဗ္ဗာကို အပြစ်ကြီးတဲ့သူများေ၇ာက်ပါတယ်… အပြစ်သေးတဲ့ အရက်သမားများငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းရင် နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်… ဘာကြောင့်လည်းဆို ဂေါတာမမျိုးနွယ်တယောက် အရက်သမားနတ်ပြည်ရောက်လို့ပါ…. နိဗ္ဗာန်ကတော့ အပြစ်ကြီးတဲ့ ဆရာတွေပေါ့ဗျာ (တိုက်ပိတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့သူမျိုးပေါ့)
(၉)မိန်းမမယူဘဲ သင်္ကန်းခြုံပြီး ဖာချနေသော ဘုန်းကြီးများ ဖာမချဘဲ ကိလေသာ၊မေထုန်ကို မိမိ့စိတ်ဖြင့် မိမိ့လက်ဖြင့် ပြုလုပ်နေသော ဘုန်းကြီးများ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါသလား????
လိုက်ဖဲ့ရရင် ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းရော ပိဋကတ်ကျမ်းကော မီးထ၇ှိုးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါက်ကြတော့မယ်… ယနေ့ဘုန်းကြီးများ နိဗ္ဗာန်မရောက်နိူင်ပါ… နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ တောထွက်ရမယ်.. တောမထွက်ချင်တော့ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ နေရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီ အကြောင်းပြတယ်..(တောထွက်ရင် အစားငတ်မှာစိုးလို့လေ ဒါနဲ့အကြောင်းပြတယ်. ဂေါတာမကိုယ်တိုင် တောင်တောထွက်တာ ယနေ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ ဆရာထက်သားတလကြီးတဲ့သူတွေဆိုတော့ တောမထွက်ချင်တာနဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာမှာနေရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်စိုးပြီး အကြောင်းပြတယ်) သူတို့ကျမ်းအရ ကိလေသာကို မိမိ့စိတ်ဖြင့် မိမိ့လက်ဖြင့် ပြုလုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးများ နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါ.. ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တဲ့ ဂေါတာမလိုလူမျိုးပဲ ရောက်တာပါ....(ဟီးဟီး)
သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ကြည့်ချင်တယ်(သြကား) စားချင်တယ်(အသားလေးပါမှ) ငမ်း ချင်တယ်(်ကောင်မလေး ချောချောလေးဆိုရင်).. စီးချင်တယ် (ကားကောင်းကောင်း) ကိုင်ချင်တယ် (ဟမ်းဖုန်းအကောင်းစားလေးမှ) ထောက်ချင်တယ်( ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို) (ဒါစာရေးသူ ကိုယ်တိုင်တွေ့ မြင်ဖူးတာ) ဒါကြောင့် ဒီိလို မက်မောချင်များသော ဘုန်းကြီးများအားလုံး နိဗ္ဗာန်မရောက်နိူင်ပါ.. သူ့ကို လှူ၍ အကျိုးမျော်ကိုးနေသူများလည်း သူ့ကိုလှူမိသော အကုသိုလ်ကြောင့် ကုသိုလ်ရမည်မဟုတ်ဘဲ အကုသိုလ်သာလျှင်ရမည်ဖြစ်သည်…
(၁၀) မိသားစုရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုသာ ဂရုစိုက်ပြီး တောမထွက် အိမ်၌ပင် တနေ့တနာရီစာမျှ ကမ္မာဌာန်းရူတဲ့လူများကော နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား???(သို့) နိဗ္ဗာန်မရောက် နောက့်ဘ၀ရောက်မယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်ဘ၀ကို ရောက်နိုင်မလဲ?????
ဤသို့နည်းလမ်းများဖြင့် နိဗ္ဗာန်မရောက်နိူင်ပါ… မိသားစု၏ အရေးများကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်နေတဲံ့သူများဟာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ် တစိတ်တည်းတကိုယ်တည်းမထားနိူင်ဘူး… သံယောဇာဉ်အနှောင်အဖွဲ့ကို ဖြတ်နိူင်သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မယ်…. ရေးပြမနေတော့ဘူး ဂေါတာမက ပြောခဲ့သော စကားကို သိပြီးဖြစ်တယ်… ဂေါတာမတောင် အရာအာလုံးကို စွန့်ပြီး လိုအပ်လို့ တောထွက်သွားတယ်..... မလိုအပ်လျှင် သူ့မယားငါးယောက်ကို သူစွန့်ပါမလား… တနေ့တနာရီစာမျှလောက်တော့ နိဗ္ဗာန်မရောက်နိူင်ပါ…
ငရဲလည်းပျောက် နတ်ပြည်လည်း ပျောက် ၊ ထူးအိမ်သင်ဆိုထားတဲ့ မြင့်မိုရ်တောင်လည်း ပျောက် နိဗ္ဗာန်ကလည်း ဘာမှမရှိ ပျောက်ခြင်း အကုန်ပျောက် ဘာမှမ၇ှိတဲ့သူတွေကို ဘာတွေ ဆက်ပြောပေးရမလဲကွယ်….
ညွှန်ရွှေကို တရားပြခြင်း နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မိမိကျမ်းထဲ၌ လွဲချောခြင်းအများအပြားများနှင့် အမှားအယွင်းများစွာဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ... ဒီပြင် ဘာသာဝင်များနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ...ဒါမှ သဘောမကျလျှင် ဘာသာမဲ့ ခံယူလိုက်ပါ... ဒီပြင်ဘာသာကို ညွှန်ရွှေကတော့ လေ့လာဖူးတယ်လို့တော့ ပြောတယ်.. မေးရင်သေတော့မယ်...လာမဖျီးနဲ့နော်.. ငါသိတယ်... မေးချင်တော့ဘူး...ငါ့အလုပ်ကလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးဖို့ပဲ...ဟုတ်မှ မဟုတ်တာ ဖျက်ဆီးမပေါ့..
Posted by messenger at 10:39 PM
Labels: နိဗှာန်ရောက်နိူင်ပါမလား, မဟတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ